टर्कीमा छुट्टीमा तपाईंलाई कस्तो मनोरञ्जन पर्खदैछ
ATaturk एयरपोर्ट (IST)
Sabhi Hucchi एयरपोर्ट (हेराई)
एन्टिलिआ एयरपोर्ट (AYT)
मिलाव बोरा बोरा एयरपोर्ट (BJV)
एन्निना मेन्डर्स एयरपोर्ट (ADB)
डेलामन एयरपोर्ट (DLM)
- कुनै पनि केसमा कालो केप वा बत्तीमा महिलाहरू जस्ता महिलाहरू फोटो लिन सिफारिस गरेन। यदि तपाईं एक व्यक्तिको तस्विर लिने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यदि कसैलाई कुनै विदेशीको लागि फोटोमा छाडिने चाहना छ कि छैन भनेर।
<< p> - विशेष गरी सडकमा, भीड स्थानहरूमा, विशेष गरी सडकमा। यसले घटनाहरूको एक धेरै अप्रिय मोडमा संलग्न हुन सक्छ।
- कहिले पनि, सुन्नुहोस्, टर्की र ग्रीस जस्ता देशहरूप्रति तुलना गर्न सकिदैन। हालसालै, तिनीहरू बीच एक युद्ध थियो। तपाईं उनको पुनरावृत्ति मात्र चाहनुहुन्न, उसको मा मतवालापनको बारेमा कमिल अतौतीको ठेगानामा टिप्पणी नगर्नुहोस्, सम्पूर्ण देशको लागि उहाँ एक राष्ट्रिय नायक हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बताउनुभयो। टर्कीको सबैभन्दा ठूलो शहरको नाम के हो? त्यो सहि हो, इटाननबुल, तर Konstananitool (बाइजान्टियमको मुख्य शहर, जुन मूर्मानीहरूले जित्यो)।
- के तपाइँ एक राम्रो त्रिकोण हुनुहुन्छ? होईन, त्यसपछि टर्कीमा हतार गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईं यो शिल्प सिक्नुहुन्छ र यसबाट ठूलो आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ, जत्तिकै। कुनै मोलतोल हुँदैन रोटी किन्न पनि हुँदैन। मोलतोल गर्नेको सफल अन्तको लागि मात्र खेल्नुहोस्, यो युद्ध र मृत्युको सवालमा नजानुहोस्। र यसले तपाईंलाई हेरचाह गर्दैन। Solly सडक सामानको गुणवत्ता धेरै कम छ, र मूल्यहरु स्वस्थ हुन सक्छ।
- पिउनु ट्याप पानी, तपाईं मर्नुहुनेछैन, तर तपाईं क्लोरीनको भयानक स्वाद महसुस गर्नुहुन्छ। तसर्थ, खुशी र मोक्बनको लागि बोतलहरूमा खानेपानी किन्नुहोस्। सबै स्टोरहरूमा बिक्रीमा।
- टिपिंगको रूपमा, तपाइँलाई उनीहरूलाई दिन शक्ति प्रदान गर्दछ, तर जसमा जहिले पनि क्याप्सको कुल रकमको 10 प्रतिशतले सम्मिलित हुन्छ र रेस्टुरेन्टहरू। पोर्टरहरू लगभग $ 1 प्राप्त गर्न थाल्छन्। बृद्धि टिप ट्याक्सीहरू स्वीकार भएनन्।
Astanbuul अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। Ataturk - देशको सबैभन्दा ठूलो हावा बन्दरगाह। इस्तानबलको बीचमा 20 किलोमिटर भन्दा अलि बढी छ, जससँग हल्का मेट्रोको सूतीको कपडा जडान भएको छ, जुन विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बस स्टेशनबाट। यो एयरपोर्ट टर्कीको बाँकी रिसोर्टको वरिपरि गाडी हाँक्दैछ। दुबै एयरपोर्टमा र यसमा निकटतामा नजीक छन् - र रेडियस 8 किमि भन्दा बढी हुँदैन।
Astanbuul अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। अबआह गोचेन (यो विश्वमा पहिलो महिला पाइलट थियो) - तिनीहरू भन्दा कम पछि झगडा गरियो। टेन्टरी। एसियन भागमा इटाननबुलका 35 35 किलोमिटर अवस्थित छ, यो सम्भव छ फेरी युरोपियन भाग फेरीमा पार गर्न सम्भव छ। 200 in मा उल्लेखनीय रूपमा पुनर्गठन।
त्यहाँ धेरै स्पष्ट पनि दिइन्छ, कार्यात्मक स्थानका स्थानहरूको सही स in ्केतको साथ टर्मिलहरूको पूर्ण रूपमा प्रस्तुत फ्लोर योजनाहरू।
IZMIR अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। Adnan meeneres (Adnan Manleters - 1 schoch0 -19600 मा टर्की प्रधानमन्त्री Izmir बाट 1 18 किलोमिटर छ। त्यहाँ पुग्छ, यदि तपाईं एजियन समुद्रको रिसोर्टमा जानुहुन्छ भने। एयरपोर्ट साइट / अंग्रेजी /
डेलामन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दलाम शहरको लगभग अवस्थित छ। नजिकको रिसोर्टहरू मार्मेरिस हुन् (करीव 100 किलोमिटर ड्राइभ, रिसोर्टहरू, र जमिन (एन्टिकले पूर्व ग्रीक शहर, झन्डै 400 किलोमिटर)।
टर्की रिसोर्टहरू सबै नयाँ र नयाँ मनोरन्जनहरू प्रस्ताव गर्न थाक्दैन, आश्चर्यचकित र उज्ज्वल भावनाहरू दिन खोज्दैनन्। आउटडोर गतिविधिहरू, प्राचीन वास्तुकार र भर्जिन प्रकृतिले यहाँ धेरै रोचक भेट्टाउनेछ।
मास्क एक ट्यूबको साथ मास्क - धेरै छुट्टीको मनपर्ने सामान जसले दक्षिण-पश्चिम तट टर्कीको टर्की, व्यावहारिक, कुमारी, कुमारीपालिका र छिमेकी शहरहरू छनौट गरेका छन्। एजियन सागर र उनको अचम्मको सुन्दर पानीमा पानी जति धेरै छक्क पर्न छ। यस समुन्द्रको तटमा, एक पटक पनि स्कूबासँग डाइभिंगबाट खुशी हुनु महत्त्वपूर्ण छ। स्कूबा डाइभिंगको लागि एक विशेष लोकप्रिय ठाउँ मार्मेरिसको तट थियो, जहाँ पुरानो शहरहरूको भग्नावशेष दिनमा देख्न सकिन्छ, सम्पूर्ण बाढी सडक र घरमा।
समुद्री समुद्री र वयस्कहरू र वयस्कहरू अन्तर्गत हिंड्नुहोस्। यस्तो हिड्दै, समुद्र र सूर्यबाट खुशीको अतिरिक्त, यात्रीहरूले एजियन र भूमध्य समुद्रको तटमा धेरै रोचक जानकारी र पुरातन शहरहरू प्राप्त गर्दछन्। टर्कीको दक्षिणमा तटलको पेटी पट्टीमा त्यहाँ दर्जनौं टापुहरू र आरामदायक भाँडाहरू भ्रमण गर्न सकिन्छ जुन भ्रमण गर्न सकिन्छ र उनीहरूको ईतिहास पहिचान गर्न सकिन्छ।
तथ्यको बावजुद देशका सब भन्दा लोकप्रिय झरनाहरू एक मानव निर्मित चमत्कार हो, पानीको द्रव्यमानको शक्ति र सबै आगन्तुकहरूको जोसका साथ। धिक्कारबाट धिक्कार 1 16 औं शताब्दीका ठूला झरनाहरू सिँचाइ नहरहरू जस्ता 1 16 औं शताब्दीमा सिर्जना गरिएको थियो। झरनाहरू, माथिल्लो र तल्लो डेडहरू मनोरञ्जनको लागि सहज अवस्थामा, शीर्ष डिड मुनि एक सुन्दर लुकसँग एक सुन्दर गुफा हो।
<< p> टर्कीमा धेरै पहाड नदीहरू छन्, जहाँ भिन्न जटिल क्षमताका सबै चीजहरू चलाइन्छन्। राफ्टिंग ती पर्यटकहरूको लागि आदर्श छ जुन छुट्टीमा अधिकतम एड्रेनालिन प्राप्त गर्न चाहन्छन्, विशेष गरी यदि त्यहाँ जटिलताको बढ्दो स्तरको मार्गलाई पार गर्ने उपाय छ। मार्गको मानक लम्बाई करीव 10 किलोमिटर हो, यो रोमाञ्चक प्रेमीको लागि तपाईले एक दिन हाइलाइट गर्न आवश्यक छ।
टर्कीमा जानको लागि र टर्की स्नानमा आफैंलाई पासोमा नहेर्नुहोस् - एक विशाल छोडियो। आखिर, त्यो यात्रा गर्नेले आफूलाई शरीरको लागि मात्र उपयोगी नभई, टर्कीवासीहरूको दर्शन फिर्ता गर्ने मौका पनि हटाईन्छ, तर टर्कीवासी मानिसहरूका दर्शन गर्न पनि।
<< p> कोर्स, हमका सेवाहरूले तटमा प्रत्येक होटेल प्रदान गर्दछ। यद्यपि, व्यावसायिकताको स्तर र नुहाउनेहरूको स्तर सधैं इच्छुक हुँदैन। विशेषताका साथ विशेष हम्मर भ्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ जहाँ आगन्तुकहरू सेवाहरूको पूर्ण दायरा प्रस्ताव हुन्छन्, बजारको कोठामा स्पा कटौती प्रदान गर्दछ जुन एक पेशेवर बार्नहाउसमा प्रदान गर्दछ। मालिश, होशियारी पिँट, छाला सफाई र आरामले पूर्ण आराम र सम्पूर्ण शरीर को राजमानित योगदान गर्दछ!
रंगिक टर्कीले परम्परागत समुद्र तट मात्र होइन, विशेष मनोरञ्जन मात्र खारेज मात्र खान्छ। कृत्रिम दृश्य बिना नै वास्तविक टर्की केवल सबैभन्दा जिज्ञासु र साहसी पर्यटकहरूमा खुल्छ जुन वायुशान पर्यटक ट्रेलबाट टाढा जान डराउँदैनन्। जताततै भ्रमणको लागि भ्रमणको लागि यो सफल हुन सक्ने सम्भावना छैन। अप्ठ्यारो नपर्नुहोस्, तपाईंले भर्खरै यस न्यानो देशमा आराम गर्ने हरेक दिन रमाइलो गर्न आवश्यक छ!
ri> Rushln07ren ment07070304040ve0ve0ve040ve040 सर्वषद रेस्टेन परिवार परिवारसँग आराम गर्न को लागी। 8 दिनसम्म बच्चाहरु ल्याए। सबै जना बच्चा र वयस्क दुबैको लागि मनोरन्जन मनपर्यो। तपाईं नि: शुल्क इन्टरनेट, सूर्य बेड, पौंडी पोखरी को फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। श्रीमान्ले सौना भ्रमण गरे, मैले स्को उपचार बिताए। / LI> :
होटेल साइड, टर्कीको बारेमा समीक्षा हेर्नुहोस्। प्रत्येक होटेलको पेशेवरहरू सिक्नुहोस्, तिनीहरूलाई मूल्यको लागि तुलना गर्नुहोस्, आराम र स्थानको स्तर।